Ikhaya » izithuba » Iindaba zeShishini lokuhlangana » Abahambi beempuku abavela eCambodia, Lao PDR, Myanmar naseVietnam ukuya eThailand bayakhula
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseCambodia zokuhamba • Iindaba zokuhamba eLaos • Icandelo lokuhlangana • Iindaba zeShishini lokuhlangana • Iindaba zokuhamba eMyanmar • Iindaba zokuhamba eThailand • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zeMibutho yoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zokuhamba eVietnam
Abahambi beempuku abavela eCambodia, Lao PDR, Myanmar naseVietnam ukuya eThailand bayakhula
Ingqungquthela yaseThailand kunye neZiko leMiboniso (i-TCEB) -Ishishini lilungisa isicwangciso-qhinga sentengiso eCambodia, eLao PDR, eMyanmar naseVietnam (CLMV) ngomkhankaso wobuchule wokutsala abahambi abaninzi be-MICE abavela kumazwe angabamelwane.
Olu tshintsho lweqhinga lubangelwe kukusebenza okuphezulu okumangalisayo kwabahambi be-CLMV MICE ukuya eThailand, kulandela imiboniso yendlela yonyaka ophelileyo kunye nokunyuselwa ngokubambisana namahlakani eshishini, UNksk. Nichapa Yoswee, usekela-Mongameli oPhezulu we-TCEB -Shishini, utshilo.
“AMASHISHINI amashishini asuka kumazwe aselumelwaneni abonakala omelele ngendlela emangalisayo. Kulo nyaka, i-TCEB -Shishini lijolise ngokwamaqhekeza awodwa, lahlulwe laba ziintlanganiso kunye nenkuthazo (MI) kunye nemiboniso (E), ngeminyhadala yemiboniso kunye nokunyuselwa, utshilo.
I-TCEB -Shishini sele liwuqalisile umboniso wokuqala wendlela eya ePhnom Penh, eCambodia, ijolise kubahambi be-MI ngoJanuwari. NgoFebruwari, imiboniso yendlela yaseMyanmar ijolise kwi-MI & E eYangon nase-MI eMandalay. Indlela yaseVietnam ibonisa ukugxila kwi-MI & E icwangciselwe ukuphela kuka-Matshi eHanoi nase Ho Chi Minh City. Oku komeleza ubukho beThailand kwi-CLMV xa kuthelekiswa nemiboniso yendlela yonyaka ophelileyo egxile kwi-MI kwi-CLMV kwaye sisiganeko esinye kuphela esigxile kwi-E eCambodia.
Inkuthazo ethe ngqo ejolise kuzo zombini ii-arhente ze-MI kunye neendwendwe zorhwebo nazo ziqhubekile ukuya kulo nyaka, kugxilwe nzulu licandelo lentengiso, ukugcina ukukhula kweemarike.
Kwicandelo le-MI, inyathelo lijolise kwiiarhente zohambo abathumela abahambi be-MI eThailand. I-TCEB-Ishishini liphinde lisebenzisane neBangkok Airways kwiphulo lokwazisa elitsha le- "Fly and Meet Double Bonus Redefined".
Inika amalungelo okuhlangana kunye nenkuthazo yamaqela abantu abangama-30 ubuncinci abavela kwi-CLMV, ezantsi ukusuka kubuncinci be-50 ngaphambili, abaya kwimisitho okanye bahlala eThailand MICE Indawo yeNdawo (TMVS) yeehotele.
Amalungelo e-TCEB abandakanya iNkonzo yeeNdlela zeMice kwisikhululo seenqwelomoya iSuvarnabhumi, Dibana kwaye ubulise kunye neNtsebenzo yeNkcubeko. I-Bangkok Airways ibonelela ngezihlalo ezincedisayo, isibonelelo semithwalo eyongezelelweyo kunye nokukhwela ngaphambili kwiqela kunye nokukhwela kuqala.
Kwicandelo le-E, i-TCEB -Shishini lijolise kubaququzeleli beenjongo zeshishini, ezinje ngemibutho yezorhwebo, imibutho yezorhwebo, imithombo yeendaba zorhwebo, kunye necandelo lezorhwebo lokuzisa iindwendwe zorhwebo kwiingxoxo zeshishini kwimiboniso yamazwe aphesheya ehlelwe eThailand minyaka le. Abo bazisa ubuncinci iindwendwe zorhwebo ezili-10 kwimiboniso yamazwe aphesheya exhaswa yi-TCEB eThailand banelungelo lokufumana indawo yokuhlala eyi-50% ukuba bayazifezekisa iikhrayitheriya ezibekwe kwangaphambili zenani labamiselweyo ngexesha lomsitho.
Inani labahambi be-MICE abavela kumazwe amane e-2018 lifikelele kwi-151,087, ukwanda kwe-206.65% xa kuthelekiswa nabahambi be-CLMV MICE abangama-49,270 ngo-2017. Kule akhawunti iVietnam ine-31.72% (476,285), iLao PDR 11.61% (55,306), iMyanmar 11.57% (55,125) kunye neCambodia 4.77% (22,733).